ကလေး ထမင်း ကျွေးရခက်တယ် !?!? – Burmese Baby
ကလေး ထမင်း ကျွေးရခက်တယ် !?!?
-ကလေးက ၅ နှစ် ထမင်းဝါးနေတာ မပြီးတော့ဘူး ။ ထမင်းကို သုံးနာရီလောက်စားတယ်။နီတိုးမေမေကို အဲလိုတွေမေးလာကြပါတယ်။ အဲဒါဆိုရင် နီတိုးမေမေ အတွက် နည်းနည်း ခက်တယ်ပြောရမယ် ။ ဘာလို့ဆိုတော့ အဲလို မေးလာတဲ့ မေမေတို့ရဲ့ ကလေးလေးတွေရဲ့ အမူအကျင့် ၊ အကြိုက် ၊ တနေ့တာ သူတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှု အချိန်စာရင်း စတာတွေ နီတိုးမေမေ မသိဘူးလေ။ online ကနေ ဘာလုပ်လိုက်ပါ လို့ပြောရင် နားထောင်လို့ ကောင်းချင်ကောင်းမယ် ဒါပေမယ့် တကယ် လက်တွေ့ ကလေးကို ကျင့်သုံးတဲ့ အခါ ကလေးရဲ့ အခြေအနေ အကြိုက်ကိုပဲ လိုက်ပြီး လူကြီးက စဉ်းစားပြီး လုပ်ရတာမျိုးပါ။ကလေးထမင်းစားဖို့ နီတိုးမေမေ အကြံပေးနိုင်ရင်လည်း ယေဘူယျသဘောသာ ဖြစ်ပါမယ်။ ကိုယ်ပိုင် အတွေ့အကြုံ ၊ ဖတ်ထားတဲ့ ဗဟုသုတ စတာတွေကနေ အခြေခံပြီး ပြောတာလောက်ပေါ့။ တကယ် ကိုယ့်ကလေးကို အသိဆုံးက မေမေတို့ ကိုယ်တိုင်ပါ။ Mother knows the best ပါ။ ခုခေတ်မေမေ တွေ စာဖတ်ကြတော့ ကလေးကို ဘာတွေ ကျွေးသင့်လဲ ။ကျွေးရမလဲ ဆိုတာတွေ အရင်ကထက်ပိုပြီး သိလာကြပြီ။ ဒီတော့ ကိုယ့်ကလေးနဲ့ ကိုက်ညီသလိုလေးကျွေးရမှာပါ။
ထမင်းကျွေးရခက်တဲ့ ကလေးအတွက် အကြံပေးထားတာလေးပါ။
အစ်​မကြီးက ကြိမ်​တုတ်​ကို ကိုးကွယ်​သတဲ့လား
❤️သင်ဟာ မိခင်ကောင်းတစ်ယောက်ပါ ❤️